नेपालमा कसैले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले गरे : प्रदीप नेपाल — newsparda.com
नेपालमा कसैले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले गरे : प्रदीप नेपाल
प्रदीप नेपाल : नेपालमा माक्र्सवादी अथवा माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्ने त लाखौँ छन । तर माक्र्सवादको मर्म बुझेर राजनीति गर्नेचाहिँ कति जना होलान ? १०, २०, ३० कति होलान ? मान्छेतिर नजाऊँ । अरू पार्टीको कुरा गर्न मिल्दैन मैले । मजदुर, विद्यार्थी, किसान, महिला, ०४७ सालको राजा र जनता मिलेर एक नयाँ संविधान बनाए र तिनीहरूले ०१७ सालको विचार बोक्ने संविधानलाई फालिदिए । नयाँ संविधानले पनि जनतालाई सन्तुष्टि दिएन । अहिले झगडा गरिरहनुभएका मेरा नेता साथीहरूले नै माक्र्सवादको सुगन्ध बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्टै भएपछि मैले अन्ततिर गइरहनै परेन ।
युरोपमा केही मुलुक छन, जहाँ पुलिसको कुनै भूमिका छैन । कतिपय देशका जेलहरू रित्ता छन । हामी त्यस्तो कल्पना गर्न सक्छौँ अहिल्यै ? सक्दैनौँ । राक्षसजस्तो सामन्तवाद ठिङ्ग उभिएको छ, हाम्रो अगाडि । त्यो एउटा ठूलो हत्यारा हो । दलाल पुँजीवाद पनि मान्छेको रगत खाएरै बाँचेको छ । यस्तो स्थितिमा हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम ल्याएर नेपालको उद्धार गर्नु परेको छ । (लेखक नेपाल नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।)